One One Online Shop - Download Facebook Videos - GenFK.com
One One Online Shop
FB URL: https://www.facebook.com/oneonebookshop/
🎁🎁ကလေးအတွက် လက်ဆောင်တစ်ခုခုပေးချင်တယ် ... အကျိုးလဲရှိရမယ် ... သုံးရတာကိုလဲ ကလေးကပျော်ရမယ် ... စိတ်ဝင်စားရမယ် ... သင်ကြားရေးအထောက်အကူပြုလဲ ဖြစ်ရမယ် ... ရေရှည်အသုံးခံပြီး ပေးရဈေးနဲ့ လုံးဝတန်တဲ့ ကွာလတီမျိုးရချင်တယ်ဆိုရင် ဘာကိုရွေးမလဲ ...🎁🎁 Price - 64000 🌟🌟ဝယ်ယူအားပေးခဲ့တဲ့ မိဘပေါင်းများစွာဆီက အားပေးထောက်ခံမှုအပြည့်ရရှိထားတဲ့ Dimdu Smart Reading Pen ကို ရွေးခြယ်လိုက်ပါ🌟🌟 Reading Pen ဆိုတာဘာလဲ ??? 🖌🖌🖌စာအုပ်ပေါ်ကို ထောက်လိုက်တာနဲ့ အသံထွက်ဖတ်ပြပေးနိုင်ဖို့ ဆန်းသစ်တီထွင်ထားတဲ့ Pen လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဘာတွေ ပါဝင်လဲ??? 8 GB memory ပါတဲ့ Reading Pen တစ်ချောင်း - တစ်အုပ်ကို စကားလုံး 1000 ပါဝင်တဲ့ ပုံပြအဘ်ိဓာန် (4) အုပ် (ဂိမ်းကစားနည်းများပါဝင်သည်) - Phonics အပြင် ဝါကျများ၊ အင်္ဂလိပ်စကားပြောများ၊ နေ့စဉ်သုံးဝေါဟာရများကို လေ့လာနိုင်မယ့် စာအုပ် (6) အုပ် - တစ်ခုလျှင် ၅-၁၀ မိနစ်ခန့်စီ အသံသွင်းထားနိုင်မယ့် စတစ်ကာအခု(800) အကျိုးကျေးဇူးများ??? ✨ Phonics နှင့် အင်္ဂလိပ်စကားပြောကို အိမ်မှာပင်အလွယ်တကူလေ့လာသင်ယူနိုင်ခြင်း ✨Listening skill တိုးတက်လာစေခြင်း ✨ကလေးများကို ကိုယ်တိုင်လေ့လာသင်ယူတတ်သောအလေ့အကျင့်ကောင်းရရှိစေခြင်း ✨screen time ကိုလျော့ချပေးနိုင်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာအခြေခံကောင်းများ ရရှိစေနိုင်ခြင်း ✨Reading Pen ကို MP3 player ကဲ့သို့ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း ✨Reading Pen တွင် internal memory 8GB ပါဝင်သဖြင့် ပုံပြင်၊ သီချင်း၊ ကဗျာများစွာကို သိမ်းထားနိုင်ခြင်း ✍🏻✍🏻Review များ✍🏻✍🏻 ✔ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြားရေးအထူးပြုမဟာဘွဲ့ကို စင်ကာပူနိုင်ငံမှ ရရှိထားပြီး အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ မေမေတစ်ယောက်ရဲ့ Review ကို ဖတ်ချင်ရင် အောက်က လင့်ကို နှိပ်ပါရှင် https://www.facebook.com/100024730487990/posts/276142653220082/ ✔ Myanmar Influenzer Award ရထားတဲ့ Mommy Blogger မေမေတစ်ယောက်ရဲ့ Honest Review လေးကို အောက်က Link မှာ ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ https://www.facebook.com/100010891749552/posts/674143359625383/ ✔ သားသားလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဖေဖေက အခြားကလေးတွေအတွက်ပါ စေတနာထားပြီး Dimdu Smart Reading Pen လေးကို Review ရေးထားပေးတာပါ။ အောက်က link မှာ ကြည့်လို့ရပါတယ်။ https://www.facebook.com/100000222382661/posts/2371201346230588/ ရန်ကုန်မြို့တွင်း delivery ရှိပါတယ် မြို့နယ်အလိုက်ပို့ခယူပါတယ် တခြားမြို့သို့လည်း ဘဏ်ငွေလွဲဝင်ပြီးကားဂိတ်ပို့ပေးပါတယ် Messenger သို့ Viber 09795269061 သို့ နာမည် ၊ လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်ပို့ပြီး ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်
ဖေဖေ၊ မေမေတို့ရေ... 📚 One One Online Shop ရဲ့ Facebook Messenger Bot ကနေ သားသားမီးမီးတို့အတွက် စာအုပ်များမှာယူနိုင်ပြီနော်။ Bot နဲ့ဈေးဘယ်လိုဝယ်ရမလဲဆိုတာကို ဒီ Video လေးမှာ အသေးစိတ်ရှင်းပြထားပါတယ်။ ကဲ အခုပဲ Messenger Bot ကနေ သားသားမီးမီးတို့အတွက် စာအုပ်တွေ မှာကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ 👉 ပထမဆုံး Get started ကို နှိပ်ပြီး စာအုပ်များရှာဖွေလို့ရပါပြီ စာအုပ်ပုံများ အတွင်းစာမျက်နှာများ ဈေးနှုံးများကို တပုံချင်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားပါတယ် Get started အောက် Our store မှာလည်း ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ် 📗 အသက်အရွယ်အလိုက် စာအုပ်များ မျိုးစုံရရှိနိုင်ပါတယ် သိရှိလိုသည်များ Messenger ထဲသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည် m.me/oneonebookshop
အသုံးပြုပုံ video file 👪 မိဘဆိုတာ သားသမီးတွေ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ စာလုပ်တာကို မြင်ချင်ကြတယ် မဟုတ်လား။ 👫 တုတ်တစ်ချောင်းနဲ့ စာလုပ်စမ်းပြောစရာမလိုပဲ သူတို့ အထိအတွေ့ မစိမ်းတဲ့ဖုန်းနဲ့ စာသင်ပေးလို့ရနိုင်မယ်ဆိုရင် မကောင်းဘူးလား။ 🐕 အရောင်စုံ ပုံလေးတွေ ၊ အကောင်လေးတွေ၊ အရုပ်လေးတွေဆိုတာ ကလေးတွေ ဆော့ရတာ အပျော်ဆုံးပဲလေ။ 📱 အဲ့ဒါတွေကို ဈေးကြီးပေးစရာမလိုပဲ Application တစ်ခုဝယ်ပေးလိုက်တာနဲ့ ကလေးတွေလက်ထဲအရောက်ပို့နိုင်ပါပြီ။ 🌏 ကမ္ဘာ့ရွာဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ English ကလဲပိုပြီး လိုအပ်လာတာ မိဘတွေအသိပါ။ 📲 ကျောင်းမတက်ခင် အချိန်တည်းကကလေးတွေကို Englishစာနဲ့ လက်ပွန်းတတီးဖြစ်နေပြီး ကျောင်းတက်တဲ့အခါ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ လေ့လာနိုင်ဖို့ 360ed က Alphabet AR Application ကို ထုတ်လုပ် ပေးလိုက်ပါပြီ။ 📔 ဖတ်စာအုပ်မှာပါတဲ့ vocabulary ဝေါဟာရ 79 လုံးကို ကလေးတွေ အကြား၊ အမြင်တင်မကပဲ ဆော့ကစားရင်း သင်ယူလို့ရပါပြီ။ Price - 9500 Feature - 3D ရုပ်ကြွပုံ 79 ပုံ နှင့် ပီသမှန်ကန်သော Englishအသံထွက် - Learn and play section -ကစား၍သင်ယူနိုင်သော ဂိမ်း section - Application size - 75 Mb - Card size -3x 4.2 inches - Activation QR code - Instruction စာရွက် - Application download လုပ်နည်း (ပုံလည်းတင်ထားပေးပါတယ်) Let's learn English alphabet with our AR app! Scan the flashcards and learn along with the animations on the screen. အသစ်ရောက်သောစာအုပ်များကို လွယ်ကူစွာကြည့်နိုင်ရန် မိမိဖုန်းထဲသို့ One One App download ထားနိုင်ပါသည် အောက်ပါ link ကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းနိုင်ပါတယ် Download Link iOS: https://itunes.apple.com/th/app/one-one-book-shop/id1359019335 [^] Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oneonebookshop.oneonebookshop [^] https://www.oneonebookshop.com/ ရန်ကုန်မြို့တွင်း delivery ရှိပါတယ် မြို့နယ်အလိုက်ပို့ခယူပါတယ် တခြားမြို့သို့လည်း ဘဏ်ငွေလွဲဝင်ပြီးကားဂိတ်ပို့ပေးပါတယ် Messenger (or) 09795269061 သို့ နာမည် ၊ လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်ပို့ပြီး ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်
Busy - Board books for toddlers For age0-3Price - 10000
Bizzy Bear - Board books for toddlers For age0- 3
Smart pen for Oxford reading tree In stock Price - 80000 Oxford reading tree stage 1 to 12 ထိ စာအုပ်ပေါင်း 300 ကျော်အကုန်ဖတ်တဲ့ smart pen လေးပါ စာရွက်လေးထိတာနဲ့ အသံထွက်ပါတယ် စာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်ပြီးရင်လည်း ပြန်သင်ပေးသော After reading guide လည်းပါပါတယ် တချို့စာအုပ်ဆိုရင် သီချင်းလေးလည်းပါပါတယ် ကလေးများ အသံထွက် Pronunciation ကောင်းမွန်ရန် အထူးသင့်တော်ပါတယ် Mp3 နားထောင်ရန် extra micro SD 16G ထိ ထပ်ထဲ့လို့ရပါတယ် Messenger or 09795269061 သို့ ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်